Ngo-Eva Wonyaka Omusha, ukwakheka kweholide kudinga indlela efanayo yokuzikhethela njengokukhetha izesekeli nezembatho. Indlela yokwenza ukwakheka koNyaka Omusha omuhle, konke kuxhomeke ekukhethweni kwesithombe sobuhle, isici esinqunyiwe kuyoba lapho owesifazane ezogubha khona uNyaka Omusha. Lapho kuzoba khona: ekhaya nomndeni, endlini yezindlu, kumcimbi wezenhlalo noma ku-nightclub nabangani, khona-ke ukwakheka koNyaka Omusha kuzofanisa indawo. Imibala enemibala emihle, enemibala ekhanyayo, enemibala ekhanyayo enemibala, yemvelo noma i-powder ene-flickering effect, konke lokhu akuhambisani nemvelo ebusika ka-2011 no-2012. Sizokunikeza izinketho eziningana zokwakheka kweNew New Year's fun, futhi kuye ngokuthi uzokugubha uNyaka Omusha, uzokhetha ukwakheka okukufanele.
Unyaka Omusha emndenini womndeni - inkambo ngobuthakathaka.
Uma uzogubha uNyaka Omusha nomndeni wakho, khona-ke inketho enhle kunazo zonke kuyoba ukwakheka kwemvelo. Akudingeki ukushaqeka abazali bakho, ukwakheka kwakho okwedlulele, nomyeni wakho bayakwazisa ubuhle bakho bemvelo, ngakho-ke lesi sithombe esikhanyayo sigcinelwe amaqembu nabangani. Uma ufuna into ethile ejabulisayo, gcizelela into eyodwa noma izindebe, noma amehlo, kungcono ukugxila amehlo. Ukuze uthole imizwa yemikhosi, udinga ukusebenzisa i-powder ngomphumela wokuqhafaza bese ukhetha ama-shadow shades emvelo.
Ukwenzelwa konyaka omusha weqembu.
Uma uzogubha uNyaka Omusha esikhwameni esinezintandokazi noma ebusuku ukutholakala nabangani, lapha ekwenzeni uvunyelwe konke - ukukhwaza kwamapayipi, izithunzi ezithandweni lwezintambo zomlomo, ama-lilac-pink angabheki okomuntu othumayo, nje ungadluli.
Unyaka Omusha ekugqokweni kweNdlovukazi yeqhwa.
Uma uhlangana noNyaka Omusha esiteshini se-ski noma ngaphandle komuzi, zama ukuzama isithombe seNdlovukazi yeqhwa. Ngalokhu, kufanele kube khona ukukhanya kwesikhumba semvelo noma isikhala semisipha, isandiso semascara elingenamanzi, esimhlophe, esimhlophe, esibomvu noma esithungayo, elihle noma ithoni lesikhumba sobuso. Into esemqoka ukusebenzisa ngokufanele silvery noma imithunzi emhlophe. Dweba "imicibisholo enobhanana" emgqeni weselula, le micibisholo ibangele ekhoneni elingaphakathi leso kuya ekhoneni langaphandle liso. Ukuze imicibisholo ibe bushelelezi futhi iphelele, sebenzisa ibhulashi emanzini ukwenza lokhu.
Mhlawumbe kulonyaka omusha ulindelwe ngenye imicimbi yezwe: izivakashi ezidumile, isidlo se-gala, ibhola elisemthethweni eligciniwe, ubusuku e-Opera, njalonjalo. Kufanele ube ngengubo phansi, ngezingubo ezibizayo, konke okusemthethweni futhi okuqinile. Ukuze wenze lokhu, ukwakheka kufanele kube okufanele, kusihlwa kusihlwa, noma okuvamile, kodwa ukugubha, ukucwengisiswa nokugqamile. Uma ukhetha okuvamile, lokhu kudinga i-mascara enamandla, amehlo amaningi aphumayo ebomvu nasegrey, ekhanyayo. I-Lipstick ingaba i-claret, i-red classic, ne-shades yemvelo.
Unyaka omusha emazweni ashisayo.
Unyaka omusha yisizathu esihle sokusebenzisa ngempelasonto futhi uhlele iholidi ogwini. Uma ufuna ukugubha uNyaka Omusha esikhundleni se-fir evamile, ngaphansi kwesihlahla somuthi wesigqila, endaweni ethile emazweni afudumele, khona-ke ungakhumbula ukuklama kwehlobo nokuhlelwa kwehlobo. Futhi imibala enjalo ekhanyayo - i-orange, i-coral, i-turquoise, eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka ngethoni emvelo, iyodala isithombe sezinyoni zeparadesi.
Ekuphetheni, kufanelekile ukufaka, ukwenza ukwakheka konyaka omusha okuhle, sebenzisa enye yalezi zeluleko, ngakho-ke ukwakheka konyaka wakho kuzokuhambelana nendawo yonyaka omusha.
Umlando wokuthuthukiswa kokwenza nokwenza
Indlela yokusebenzisa isisekelo: imfundo elula evela kubaculi bezimonyo!
Ikosikazi yangaphambili kaKurban Omarov yatshele ngokuhlukana kwakhe ngo-Xenia Borodina
Inkabi nama-noodle e-sauce enhle futhi emuncu
Inkukhu iphetha nge-apula
Kulimaza futhi kuzuze ukushaya indlwabu - imithi
Pate kusuka quince
Indlela yokwenza umama athathe isoka lakhe?
Ngabe i-Krasnaya Gorka ngo-2016? Amasiko nokubikezela inhlanhla
Iqiniso lonke mayelana nokuthuthukiswa ngaphambi kwesikhathi kwezingane
Siyakuhalalisela izingane ezifunda nabo kusukela ngo-Mashi 8